Sina Mpivady filamenta malefaka borosy borosy nify sy mpanamboatra | Enyuan
Ity borosy nify mpivady ity dia namboarina manokana tamin'ny loha borosy roa miendrika fo, izay atambatra ho modely miendrika fo tanteraka. Ny loha borosy dia namboarina tamin'ny Xiaoqiao, izay mety sy malefaka hanadio ny nify eny an-joron-trano
Toetoetra Diovy, arovy ny siligaoma
Savaivony borosy 0.01mm
Volony landy tsara 0.01mm
Ny savaivony tendron'ny filamenan'ny borosy kely toy ny 0,01mm dia tsy vitan'ny manadio ny tasy eo ambonin'ny nify ihany, fa afaka miditra lalina any amin'ny sulcus gingival sy elanelam-baravarana koa; ny filamentan'ny borosy malefaka dia mikarakara moramora ny siligaoma, manao ny nify tsirairay ho madio sy madio toa ny fitiavana nefa tsy mamela loto.
Ny kofehy borosy dia mandray ny loko mainty sy fotsy mahazatra, ny endrika dia tsotra sy mahazo aina, ary ny vatana iray manontolo dia vita amin'ny plastika misy sakafo, izay ahazoana aina raha mikasika azy
Ahoana ny miborosy nify tsara?
Manolo-kevitra ny hisolo ny borosy nify mandritra ny telo volana. Arakaraky ny fampiasana ny borosy nify no hahamora kokoa ny hanaovana ny volon'ondry sy ny fitongilana ary hihena ny fahaizan'ny manadio. Mandritra izany fotoana izany, ny loha borosy dia toeram-pambolena bakteria ihany koa.
1: Ireo volom-bolo sy nify dia mirona amin'ny zoro 45 °, manindry moramora, miborosy 4-6 heny mitsivalana ary miborosy mitsangana.
2: Borosio aloha ny lafiny ivelany amin'ny nify ambony sy ambany, avy eo borosy ny lafiny anatiny amin'ny nify, afindra etsy sy eroa ny borosy nify.
3: Borosio ny haavon'ny tsakoina, apetraho tsara ny borosy nify, ahintsano vetivety ny borosy nify, ary diovy tsara ny nify.
4: borosio ny vodin-tendrombohitra mba hidina, mila miborosy ny lafon'ny volon-doha avy ao anatiny mankany ivelany ianao.
5: Farany, borosy ny lela, borosio moramora hatrany am-pototry ny lela ka hatrany amin'ny tendron'ny lela mba hanesorana ny saron'ny lela ary hanala bakteria.
6: kosohy ny nifinao amin'ny kalitao avo lenta mandritra ny telo minitra isaky ny mitandrina ny fofonainao.
Previous: borosy nify iray alina dia natao malefaka tsy maharary ny siligaoma
Manaraka: oem malefaka borosy borosy borosy nify kely